အရှင်ဝိမလဝံသ၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ချစ်ကို သည်အရှင်ဝိမလဝံသ's ၏ 'မေတ္တာသုတ်ပါဠိ+အနက် ဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့်ရွတ်ဆိုကျိုး' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
phyuthi သည်အရှင်ဝိမလဝံသကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်အရှင်ဝိမလဝံသ's ၏ 'မင်းကျင့်တရားဆယ်ပါးကိုခေတ်နှင့်အညီလေ့လာခြင်း' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်အရှင်ဝိမလဝံသ's ၏ 'သီလသိက္ခာများသည်ဟုဆိုရာဝယ်' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်အရှင်ဝိမလဝံသ's ၏ 'ပုထုဇဉ်များ ကြိုတင်မသိနိုင်သော အကြောင်းတရားငါးပါး' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်အရှင်ဝိမလဝံသ's ၏ '၃၁ဘုံနှင့် နိမိတ်ကြီးလေးပါး' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်အရှင်ဝိမလဝံသ's ၏ 'Happy New Year ကို တရားသဘောဖြင့်လေ့လာခြင်း' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်အရှင်ဝိမလဝံသ's ၏ 'ဘာသာခြားတို့ကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရသည့် ရှေးဟောင်းနာလန္ဒာတက္ကသိုလ်ကြီး(နိဂုံးပိုင်း)' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်အရှင်ဝိမလဝံသ's ၏ 'ကိုယ်ကျင့်သီလဆိုတာ အသက်ထက် တန်ဘိုးကြီးသည်' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်အရှင်ဝိမလဝံသ's ၏ 'မြေမြိုသည်အထိဆိုးကျိုးကိုပေးတတ်တဲ့ မုသာဝါဒ ကံအကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်အရှင်ဝိမလဝံသ's ၏ 'ရဟန်းတော်များဘာကြောင့်ခေါင်းရိတ်ကြရတာလဲ(သို့)ဆံပင်၌ အပြစ်(၁၆)ပါး' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည် အရှင်ဝိမလဝံသ's၏ 'တန်ဘိုးမဲ့အသက်ရှည်ခြင်းနှင့်တန်ဘိုးရှိအသက်ရှည်ခြင်း'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်အရှင်ဝိမလဝံသ's ၏ 'တန်ဘိုးမဲ့အသက်ရှည်ခြင်းနှင့်တန်ဘိုးရှိအသက်ရှည်ခြင်း' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်အရှင်ဝိမလဝံသ's ၏ 'မြတ်စွာဘုရား ဂုဏ်တော်(၉)ပါး ပါဠိ+မြန်မာပြန်နှင့် ဂုဏ်တော်ပွားရကျိုး' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်စန်းစန်းစိုး သည်အရှင်ဝိမလဝံသ's ၏ 'သံဃာ့ဂုဏ်တော်(၉)ပါး ပါဠိ+မြန်မာပြန်နှင့်ရွတ်ဆိုရကျိုး' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
အိမ်ရှင်ကုိုနှင်၍ အိမ်လုသော မျောက်မည်း
ဒီဘလော့ကို ဇန်န၀ါရီ 12, 2014 တွင်12:25am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments 8 Likes
ဒီဇာတ်တော်လေးက တိကနိပါတ် ဇာတကဝတ္ထု ကုမ္ဘဝဂ် ဥဒုမ္ဗ္ဗရဇာတ်တော်၏ အတိတ်ဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်။လွန်လေပြီးသောအခါ ဗာရာဏသီပြည်ကြီးမှာ ဗြဟ္မဒတ်မင်းကြီး မင်းပြုတဲ့အခါ ဘုရားလောင်းသည် တော၌ရုက္ခစုိုးနတ်ဖြစ်၏။ ထုိုတောဝယ် မုိုးကာလဝယ် ခုနစ်ရက် ခုနစ်လီ မုိုးရွာ၏။ ထုိုအခါမှာ တစ်ခုသော မျက်နှာအနီရောင်ရှိတဲ့ မျောက်ငယ်လေးဟာ တစ်ခုသော မုိုးရေမစုိုစွတ်တဲ့ မုိုးလုံလေလုံ ကျောက်ဂူတစ်ခုမှာ ချမ်းချမ်းသာသာ အေးအေးချမ်းချမ်း အန္တရာယ်ကင်းစွာနေထုိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီနေရာကုို မျက်နှာမည်းတဲ့ မျောက်ကြီးတစ်ကောင်က မုိုးရေစုိုရွှဲ…
"(၉၆၉)ဘာသာဝင်များအား(၉၆၉)ဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူစေခြင်းသည် ပြိတ္တာဘုံသို့ရောက်မည့် လမ်းစဉ်ဟု ပြောဆိုသူများအား ပြန်လည်ဖြေကြားချက်"
ဒီဘလော့ကို မေ 14, 2013 တွင်12:57am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment3Likes
Zayar Nyunt Tin ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမအရတော့ သူ့ဟာသူ (မွတ်ဆလင်ဖြစ်ဖြစ်၊
ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖြစ်၊ဂျူးဖြစ်ဖြစ်၊ ဟိန္ဒူဖြစ်ဖြစ်) သူတစ်ဖက်သားရဲ့ စားဝတ်နေရေးကို ကျပ်တည်းအောင်လုပ်တာ ၊ ဒီလို အကျပ်အတည်းဖြစ်နေတာကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာဟာ “အပယ်(၄)ဘုံ” အနက် မစားရမသောက်ရတဲ့ပြိတ္တာဘုံကို သွားလမ်းဘဲ။ ပြိတ္တာလမ်းစဉ်လိုက်နေတာဘဲ။
မယုံဘူးဆိုရင် (တကယ် သမာသမတ်ရှိတဲ့ သံဃာတော် အစစ် တစ်ပါး) ကို သွားမေးကြည့်။ ဒါ ဗုဒ္ဓတရား မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ပါးအရိုက် ခံလိုက်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ အယူလွဲနေကြပြီ။ “သာသနာ”…
ဒီဘလော့ကို မေ 6, 2013 တွင်9:08pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 10 Comments7Likes
ရှေးမြန်မာမင်းများလက်ထက်က မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ အခွင့်ထူးများရခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မြန်မာလူမျိုးများ အပေါင်းကို ထိပါးနှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ ဘိုင်ဆတ်အပြင် အခြားတိုင်းတစ်ပါးသား နယ်စား တစ်ယောက်လည်း ကျန်ပါသေးတယ်။ သက္ကရာဇ် (၉၆၂)ခုနစ်၊ တောင်ငူမင်းနှင့် ရခိုင်မင်းတို့ဟာ ပေါ်တူဂီမှ ရောက်ရှိလာတဲ့ ဖိလစ်ဒီဘရစ်တိုနီကိုတီ(ခ) ငဇင်ကာကို လူနှစ်ထောင်ကျော် သဘောင်္သုံးစင်း လွန်ကျင်တစ်ရာကျော် အပ်ပြီး သန်လျင်မြို့မှာ နေထိုင်စေပါတယ်။ ဒီလိုအင်အား အလုံးအရင်းနှင့် သန်လျင်မြို့ကို အပ်လိုက်ခြင်းဟာ တိုင်းတစ်ပါးသား လူမျိုးခြား…
“သတိထားဆင်ခြင်ဖွယ် မပေးလှူကောင်းသော အလှူ(၁၀)မျိုး”
ဒီဘလော့ကှိုဧပြီ 23, 2013 တွင်12:03pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments9Likes
ပေးကမ်းလှူဒါန်းမှုပြုသော်လည်း ဒါနဟု မခေါ်ရ။ အဒါနဟုသာ ခေါ်ရသည့် ပေးကမ်းမှု(၁၀)မျိုးကို မိလိန္ဒပဥှာပါဠိတော် (ဝေဿန္တရပဥှာ) ၌ ဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်း ဖော်ပြပါမည်။ ထိုမပေးလှူကောင်းသော အလှူ(၁၀)မျိုးမှာ
၁။ မူးယစ်စေတတ်သော သေရည်သေရက် စသောအရာများကို ပေးလှူခြင်း= မဇ္ဇဒါန။
၃။ မေထုန်မှီဝဲမှုပြုရန် အမ-သတ္တဝါများကိုပေးလှူခြင်း= ဣတ္ထိဒါန
၅။ ကာမဂုဏ်စိတ်ကို ထကြွပွားများစေတတ်သော…
10:08pm အချိန်အောက်တိုဘာ 26, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:48pm အချိန်အောက်တိုဘာ 26, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:48pm အချိန်ှဧပြီ 23, 2013, တွင် လင်းကိုကို မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
တင်ပါ့ ဘုရား တပည့်တော် မှားယွင်းသည်ဟု ဆိုခြင်းမှာ ရေးသားထားသော စာနှင့် ရေးသားသူကို ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ ဘုရား.တပည့်တော် မှားယွင်းသည်ဟု ဆိုခြင်းမှာ ဗုဒ္ဒဓမ္မတို့အား မိမိသဘောဖြင့် လိုရာယူ၍ရသည်ဟု ဆိုသည်ကို မှားသည်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဘုရား.
2:03am အချိန်ှဧပြီ 17, 2013, တွင် ဇော်ထက်မောင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မင်္ဂလာရှိသော ညချမ်းအခါသမယလေးမှာ တပည့်တော် ဇော်ထက်မောင် လာရောက်လည်ပတ်သွားပါတယ်ဘုရား။ ကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ ပရိယတ်၊ ပဋိပတ် နှစ်မျိုးကို ကောင်းစွာသင်ယူ လေ့ကျင့်အားထုတ်နိုင်ပြီး ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေ၊ သာသနာ့အကျိုးကိုလည်း ဆထက်တပိုး ရွက်သည်ပိုးနိုင်ပါစေလို့ တပည့်တော် ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ဘုရား.........။
5:03pm အချိန်မတ် 14, 2013, တွင် ကလေးတို.ဆရာမ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အင်တာဗျူးမှာ ဓါတ်ပုံ လိုတယ်ဆိုလို. တပည့်တော်ပို.လိုက်ပါပြီ -
အရှင်ဘုရားပုံတစ်ပုံလောက် ကို buddhismworld2012@gmail.com သို.ပို.ပေးပါဘုရား-
1:43pm အချိန်မတ် 14, 2013, တွင် ကလေးတို.ဆရာမ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အင်တာဗျူးအတွက် တပည့်တော် မေးခွန်းများရေးသားပေးပို.လိုက်ပါပြီ-
အဆင်ပြေသလို ပြုပြင် ဖြည့်စွက်ပြီး တပည့်တော်ဆီကိုပဲ ပြန်ပို.ပေးပါဘုရား-
ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့စွာနဲ.သာသနာ့အကျိုး အဆပေါင်းများစွားတိုး၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဘုရား
5:01pm အချိန်အောက်တိုဘာ 30, 2012, တွင် ♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
7:00pm အချိန်အောက်တိုဘာ 26, 2012, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
5:03pm အချိန်အောက်တိုဘာ 10, 2012, တွင် သဒ္ဓါဖြူ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အရှင်ဘုရားအခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘုရား....
2:58am အချိန်သြဂုတ် 16, 2012, တွင် အရှင်အာစိဏ္ဏ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။